Tilmaamaha Khawaarijta Dhageyso – Radio Muqdisho
Tilmaamaha Khawaarijta Dhageyso
Khawaarijtu waxa ay ahaayeen kooxdii ugu horreysay ee ka baxda midnimada Muslimiinta Isla markaana banneysta dhiigga karaamada dadka muslimka ah, dagaalna la gala hoggaamiyeyaashii muslimiinta.
Khawaarijta ayaa dilay Cuthmaan Ibn Caffaan iyo Cali Ibn Abii Daalim oo ahaa labo saxaabi oo Ilaahey iyagoo nool jannada ugu bishaareeyay.
Nabigeenna CSW horay ayuu u sii sheegay in ay soo bixi doonaan,waxa uuna ku baaqay in si daran loola dagaallamo.
Xilligan la joogo waxaa jira kooxo fara badan oo leh tilmaamihii khawaarijta, sida gaaleysiinta iyo dilka dadka muslimka ah sabab la’aan iwm.
Haddaba barnaamijka Tubta Toosan ee toddobaadkan waxaan uga hadleynaa Tilmaamaha Khawaarijta lagu garto iyo meelaha isaga egyihiin iyaga iyo kooxaha xag jira ee casrigan ka jira dalalka Islaamka, waxaana barnaamijka Marti noogu ah Sheikh Maxamed Cabdulle Maxamed.
Sii-hayaha Ra’isul wasaaraha oo kulan sagootin ah loo sameeyay
Wafdi ka socoda dowladda oo maanta gaaray Degmada Tayeglow